स्नानगृहले गिलासलाई सुख्खाबाट छुट्ट्याउन ग्लास प्रयोग गर्दछ, जुन उज्यालो र विशाल छ
घर / ब्लग / स्नानगृहले गिलासलाई सुख्खाबाट छुट्ट्याउन ग्लास प्रयोग गर्दछ, जुन उज्यालो र विशाल छ
2020 / 12 / 05 वर्गीकरणब्लग 2881 0
बाथरूम एक नुहाउने क्षेत्र, एक शौचालय क्षेत्र र एक कार्य क्षेत्र मा आफ्नो कार्य अनुसार विभाजन गर्न सकिन्छ। केवल नुहाउने क्षेत्र मात्रै आर्द्र हुन्छ, त्यसैले भिजेको ठाउँलाई सुक्खाबाट छुट्याउन आवश्यक छ। यसले सुनिश्चित गर्नेछ कि शौचालय र ताजा क्षेत्रहरू सुख्खा छन् र यसमा पर्ची जाने सम्भावना कम छ। यो सिफारिश गरिएको छ कि तपाईं बाथरूममा सुख्खाबाट भिजेको दूरी राख्न गिलास विभाजन प्रयोग गर्नुहोस्, र बाथरूम बढी हावायुक्त र उज्यालो देखिनेछ!
गिलासको विभाजनले नुहाउने ठाउँलाई बाँकी कोठाबाट अलग गर्न सक्दछ, ताकि भिजेको र सुक्खा भागहरू छुट्याउन सकियोस्, तर यो पनि उज्यालो र पारदर्शी छ, ताकि प्रकाश बत्ती जान सक्दछ र बाथरूम त्यति सानो देखिँदैन।
गिलास विभाजनले आंशिक ऐनाको रूपमा पनि काम गर्न सक्दछ, बाथरूमलाई अधिक प्रशस्त देखिन्छ। यो विशेष गरी बाथरूमको लागि सही हो जुन बायाँ र दायाँ छुट्याइएको छ।
यदि बाथरूम अधिक विशाल छ भने, तपाईं नुहाउने ठाउँमा बढी बाथटबहरू पनि स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। गिलास विभाजनले बाथटब, शौचालय र सिंक अलग गर्दछ, तर अझै तिनीहरू समान ठाँउमा देखिन्छन्।
यदि तपाईंलाई लाग्छ कि गिलास पार्टीसनले पर्याप्त गोपनीयता प्रदान गर्दैन भने, तपाईं केही गोपनीयता प्रदान गर्न आधा भित्ता विभाजनको साथ गिलास पार्टसन प्रयोग गर्न पनि सोच्न सक्नुहुन्छ।
यो जस्तो, नुहाउने कुना मा अवस्थित छ। यदि तपाईं एक गिलास विभाजन प्रयोग गर्नुहुन्न भने, त्यसो भए कुनै बत्तीमा राख्न मिल्दैन। त्यस्तो सानो स्नान स्पेस विशेष गरी उदासिन हुनेछ।
साथै, गिलास विभाजनहरू बहुमुखी शैली हुन सक्छ। ग्लास विभाजनहरू कुनै पनि शैलीको बाथरूममा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो अन्य जटिल संगमरमर वा काठ विभाजन भन्दा धेरै राम्रो छ।
के तपाइँ यी वायुमण्डलीय र स्टाइलिश बाथरूम बीच मनपर्ने छ? जबसम्म एक गिलास विभाजन प्रयोग गरिन्छ, बाथरूम निश्चित रूपले धेरै बिन्दुहरूद्वारा विस्तार गर्न सकिन्छ। तपाईं मेडिटेरियन, मिनिमलिस्ट, वा विलासी क्लासिक हुनुहुन्छ भन्ने कुराको फरक पर्दैन, तपाईं बाथरूमको समग्र भावनालाई असर नगरी नै बीचमा गीला विभाजन थप्न सक्नुहुनेछ।
अघिल्लो :: सबैभन्दा उत्तम भान्छा सिink्क नल कुन हो? अर्को: अरू कसैको घरमा डबल सिंक डिजाइन देखे पछि, म ईर्ष्यालु थिएँ!
2021 / 01 / 11 1175